TradingUkuthengiswa kweStock kwenzuzo enkulu! - Funda nge-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kwishishini lokuThengisa
Ngaba ujonge ukuthenga, ukuthengisa kunye nokuthengisa izitokhwe kwi-Intanethi? Ukuba kunjalo, kukho iimfumba zabarhwebi ezisebenza kwisithuba se-Intanethi ezikuvumela ukuba uthenge izitokhwe ngokulula. Kufuneka ufumane umthengisi ohlangabezana nezona mfuno zakho, ubeke imali ngedebit / ikhadi letyala okanye i-e-wallet, kwaye ulungile.
Kwiimeko ezininzi, iindawo zentengiso yesitokhwe zikunika ukufikelela kumakhulu ezabelo zonxibelelwano ngokucofa iqhosha. Oku kuhlala kubandakanya iimarike eziphambili njengeNew York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, kunye neLondon Stock Exchange (LSE).
Kule nqaku, sigubungela i-ins kunye nokuphuma kwendlela yokusebenza kwempahla kwi-Intanethi. Emva kokuyifunda ngokupheleleyo, uya kuba uxhobile ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukuze ufumane umsebenzi wokurhweba ngestokhwe kunyawo lwasekunene.
Qaphela: Uninzi lwabathengisi be-stock newbie baphulukana nemali kwilinge lokuqala, ke kubalulekile ukuba ubazi ngokuqinileyo ubungozi. Kananjalo, siyathemba ukuba ngokufunda esi sikhokelo ngokupheleleyo, uya kuba nazo zonke izixhobo ezifunekayo ukuze uphumelele kwindawo yokuthengisa esitokhwe kwi-Intanethi!
Yintoni ukuthengiswa kweStock?
Kukho umahluko ocacileyo phakathi 'kwentengiso yesitokhwe' kunye nokutyala imali ngokulula esitokisini. Ukuba yeyokugqibela, oku kuthetha ukuba ujonge ukuthenga izabelo ngombono wokubambelela kuzo iminyaka eliqela. Endleleni, uya kuqokelela izabelo zekota, emva koko ngethemba lokuba ukothula izitokhwe ngenzuzo. Ukuba yile nto uyilandelayo, kuya kufuneka usebenzise umthengisi wesitokhwe kwi-Intanethi.
Kwimeko yesitokhwe urhwebo, le yinkqubo yokuthenga nokuthengisa iimpahla ngexesha elifutshane. Umzekelo, masithi uziva unyanzelekile kwi-Apple. Unokuthatha isigqibo sokuthenga isitokhwe esinexabiso le- $ 500, emva koko uzithengise kwiiyure ezimbalwa kamva ngenzuzo ye-2%. Ngaphandle koko, unokuziva u-bearish kwi-IBM, ngoko unquma ukuthengisa okufutshane kwisitokisi sayo. Eli licandelo eliphambili kurhwebo lwesitokhwe, njengoko unamandla okwenza inzuzo ukuba ixabiso lesitokhwe senkampani liyehla.
Ngapha koko, iindawo zentengiso yesitokhwe zikuvumela ukuba ufake isicelo. Kulapho unakho ukurhweba ngemali engaphezulu kuneyo unayo kwiakhawunti yakho. Umzekelo, ukuba uthenga i-100 yexabiso le-BT kwisitokhwe nge-5: 1, ixabiso lorhwebo lwakho liya kuba yi- $ 500. Ngobuchule, amaqonga ezorhwebo esitokhwe aququzelela utyalomali ngeCFDs (izivumelwano-zomahluko). Oku kuthetha ukuba awunayo i-stock ephantsi. Ngokuchasene noko, ucinga ngokuxabiseka kwexesha elizayo.
Usebenza njani ukuThengisa iStock?
Ukurhweba ngamasheya yinkqubo yokuthenga kunye nokuthengisa izabelo ngexesha elifutshane. Ngelixa abanye abathengisi kunqabile ukuba bagcine izikhundla zivulekile ngaphezulu kweeyure ezimbalwa, abanye banokubamba utyalo-mali kangangeentsuku okanye iiveki. Nokuba yeyiphi na indlela, umxholo ogqwesileyo kukuba:
Thengisa izitokhwe ngexabiso eliphezulu kunokuba uhlawule - ukuba uhamba 'ixesha elide'
Thenga izitokhwe ngexabiso elisezantsi kunelo uhlawuleleyo - ukuba uhamba 'mfutshane'.
Kananjalo, ingqwalaselo yokuqala ekufuneka uyenzile xa uthengisa isitokhwe nokuba ufuna ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane.
Ukuhamba ixesha elide kwisitokhwe
Kwimo yayo esisiseko, ukuhamba ixesha elide kwisitokhwe kuthetha ukuba uthenga izabelo kuba ucinga ukuba iyonyuka kwixabiso. Ngale ndlela, oku kwahlukile ekuthengeni istokhwe kunye nomthengisi wendabuko.
Ngamanye amagama, unethemba lokuzithengisa ngexabiso eliphezulu kunangaphambili. Ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ixesha elide, uyakufuneka ubeke i-odolo 'yokuthenga' kumrhwebi omkhethileyo.
Nanku umzekelo wendlela urhwebo lwesitokhwe olude olusebenza ngayo.
Uziva unyuselwa kwisitokhwe seNike, ke ubeka iodolo yokuthenga
Ixabiso lakho lilonke li- $ 1,000
Ixabiso langoku lemarike yi- $ 85
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, i-Nike ibiza ama- $ 95
Oku kubonisa ukwanda nge-11.7%
Ukutshixa ngaphakathi kwiingeniso zakho, ubeka iodolo yokuthengisa
Kwipali ye- $ 1,000, ukwanda kwe-11.7% kuguqulela kwinzuzo yeedola ezili-117- kwimirhumo engaphantsi
Njengoko ubona kulo mzekelo ungentla, iodolo yakho ende yaphumelela kuba ukwazile ukuthengisa izitokhwe zakho zeNike ngeedola ezili-10 ngaphezulu kunokuba ubuhlawule kuqala. Ukuze ungene ngaphakathi kwiinzuzo zakho, kuye kwafuneka ubeke i-odolo 'yokuthengisa'. Kananjalo, urhwebo luvaliwe kwaye ingeniso iyongezwa kwibhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo.
✔️ Ukuhamba ngokufutshane kwiStock
Ngaphandle kokuba ungumtyali mali weziko, abathengisi bemfuyo bemveli abakuvumeli ukuba ufutshane kwisitokhwe. Ngokuchasene noko, unokuhamba ixesha elide. Yiyo loo nto amaqonga ezorhwebo e-CFD aziwa kakhulu kubathengisi bemini, njengoko benokubanakho ukwenza inzuzo xa bekholelwa ukuba inkampani kufanelekile ngenxa yokuhla kwexabiso.
Ngapha koko, ayizizo nje iinkampani onokumfutshane kwisithuba se-CFD broker- njengoko unokurhweba phantse ngalo naluphi na udidi lweeasethi onokucinga ngazo. Oku kubandakanya yonke into ukusuka ioyile, igesi, ii-indices, ii-ETFs, igolide, kunye needijithali.
Nangona kunjalo, umxholo wokunciphisa isitokhwe kunokubonakala udidekile kubarhwebi abatsha, ngenxa yoko siveze umzekelo ongezantsi.
Uziva ubambekile kwizitokhwe zikaFacebook, ke uthatha isigqibo sokufaka iodolo yokuthengisa
Ixabiso langoku le-Facebook yi- $ 130
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, izitokhwe zikaFacebook ziye zehla zaya kwi- $ 102
Oku kubonisa ukuhla kwe-21.5%
Uthatha isigqibo sokutshixa ngaphakathi kwiingeniso zakho, ke ubeka iodolo yokuthenga
Kwisibonda se- $ 1,000, ukwehla kwe-21.5% kuguqulela kwinzuzo ye- $ 210.50- kwimirhumo engaphantsi.
Njengoko ubona koku kungasentla, wenze inzuzo ecocekileyo ye-21.5%, kuba ixabiso lezitokhwe zikaFacebook lehlile ngale mali. Kuyo yomibini le mizekelo, siqaphele ukuba iingeniso zakho ziya kuxhomekeka kwimirhumo.
Kungenxa yokuba izikhundla zakho zeNike kunye neFacebook zabanjwa iintsuku ezininzi. Njengoko sigubungela ngakumbi kamva, iindawo zokurhweba ngestokhwe ziya kukuhlawulisa imali yokulala ngosuku ngalunye ukuze ugcine isikhundla sakho sivulekile.
Zeziphi izitokhwe endinokuzithengisa?
Ezona ndawo zithengisayo zentengiso kwindawo yotyalo-mali ekwi-Intanethi zikunika ukufikelela kumakhulu, ukuba akunjalo mawaka zamasheya. Oku kukuvumela ukuba wenze iphothifoliyo eyahlukeneyo yezabelo ngonqakrazo lweqhosha.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zeemarike eziqhelekileyo ezithengiswa kumaqonga ezorhwebo.
Intengiso yeStock yaseNew York (NYSE)
I-NYSE lolona tshintshiselwano lwesitokhwe sithengiswayo emhlabeni, ke kusengqiqweni ukuba abathengisi abakwi-Intanethi bakunike ukufikelela okungagungqiyo. Ezinye zeenkampani ezinkulu ze-blue-chip zidweliswe kwi-NYSE, kubandakanya izinto ezifana neDisney, iBerkshire Hathaway, iFord Motors, iJP Morgan, iVisa kunye neNike.
Hayi kude emva kwe-NYSE yile NASDAQ. Uninzi lweenkampani ezidweliswe kutshintshiselwano zivela kwihlabathi lobuchwephesha. Cinga ngemigca ye-Facebook, Apple, Twitter, Netflix, kunye neMicrosoft.
ILondon yeNtengiso yeLondon (LSE)
I-LSE ikwalikhaya kwezinye iinkampani ezinobungakanani be-mega, kubandakanya ukuthanda iBP, iBritane American Tobacco, iBarclays, iHSBC, kunye neTesco. Ukuba ujonge ukurhweba ngoqoqosho olubanzi lwase-UK, kunokuba kulungele ukutyala imali kwisalathiso se-FTSE 100.
I-Tokyo Stock Exchange (i-TSE)
Kwabo bafuna ukufumana ukubonwa kuqoqosho lwaseAsia, i-TSE likhaya kwizitokhwe ezikhulu. Oku kubandakanya ukuthanda kweSoft Bank, iMitsubishi, kunye neToyota.
Ukuthengiswa kwempahla kunye nobunini
Njengoko siphawulile ngokufutshane ngaphambili, iisayithi zokuthengisa izitokhwe zikuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise izabelo ngeeCFD. Oku kuthetha ukuba awunayo i-stock oyithengisayo. Endaweni yoko, ii-CFDs zikuvumela ukuba uqikelele kwicala elizayo lesitokhwe- yiyo loo nto unokwazi ukuhamba ixesha elide okanye elifutshane.
Kwiphepha le-flip, awuyi kuba nelungelo kuwo nawaphi na amalungelo okugcina impahla xa uthengisa ii-CFD, oko kuthetha ukuba awuyi kufumana izabelo. Endaweni yoko, uya kwenza imali ngokufumana imali ngokuthenga / ukuthengisa isitokhwe ngexabiso eliphezulu / eliphantsi kunelo ulihlawulayo.
Ukurhweba ngeStock ngeVeza kunye noMda
Ukuba usaqala kwihlabathi lokurhweba nge-intanethi, kubalulekile ukuba ube nokuqonda okuqinisekileyo malunga nendlela yokuphakama kunye nomda osebenzayo. Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwabathengisi be-newbie baphulukana nemali- ke awufuni ukwandisa le lahleko ngokusebenzisa amandla.
Kwifom yayo esisiseko, amandla okuvumela ukuba uthengise ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Oku kuchazwe njengomlinganiso, njenge-5: 1. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba unokubeka ukuthenga okanye ukuthengisa i-odolo ngamaxesha ama-5 ngexabiso 'lomda' wakho.
Umda usebenza njengediphozithi, kwaye yile nto ikuvumela ukuba ufake isicelo. Njengoko sigubungela ngakumbi kungekudala, ukuba urhwebo lwakho lwesitokhwe oluchaphazelweyo luchasene nawe ngepesenti ethile, unethuba lokuphulukana nomgama wakho kumthengisi.
Ngaphambi kokuba siqhubele phambili, makhe sijonge umzekelo okhawulezayo wentengiso enokubonakala ngathi iyimpumelelo.
Umzekelo woRhwebo oluPhumeleleyo lweStock kuZinzo
Uziva uphakama kwi-stock yaseBritane American Tobacco (BAT), ke uza kuhamba ixesha elide
Ixabiso lentengiso yangoku yeestokhwe zeBAT yi- $ 29.50
Une- £ 200 kuphela kwiakhawunti yakho, kodwa ufuna ukurhweba nangaphezulu
Njengakwimida yase-UK, usebenzisa amandla we-5: 1 kurhwebo lwakho
Oku kuthetha ukuba ubeka iodolo yokuthenga kwizitokhwe zeBAT ezixabisa i- $ 1,000
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, izitokhwe zeBAT zonyuka zaya kuthi ga kwi-33.50 ye- £ (13.5%), ke wena uyangenisa imali kwiingeniso zakho ngokubeka iodolo yokuthengisa
Ngokomzekelo ongentla, ngewawenze i-13.5% yenzuzo kwisibonda sakho se- £ 200, esifikelela kwi- £ 27. Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo somyinge we-5: 1, eyona nzuzo yakho yayiyi- £ 135 (£ 27 x 5: 1)
Umzekelo woRhwebo lweStock olungaphumelelanga kuZinzo
Ukufaka isicelo kwivenkile yesitokhwe akuyi kuhlala kukuthanda, njengoko sibonisa kulo mzekelo ungezantsi.
Ukugcina izinto zilula, masinamathele kwimizekelo efanayo nale ingentla
Ukuphinda uyiphinde-ubeka i-200 yee-oda zokuthenga kwi-American American Tobacco (BAT) kwi-5: 1
Oku kuthetha ukuba ubungakanani bakho bezorhwebo yi- $ 1,000- kwaye umda wakho uyi- £ 200
Kwiintsuku ezimbalwa kamva, izitokhwe zeBAT ziyehla ukuya kwi- £ 23.60
Njengoko oku kubonisa ukwehla kwama-20% - okuhambelana nomda owubeka phambili kurhwebo (£ 200 = 20% ye- £ 1,000), urhwebo lwakho 'luphelisiwe'
Oku kuthetha ukuba ulahlekelwe yimayile yakho eyi- $ 200
Njengoko ubona koku kungasentla, ukuba urhwebo lokunyusa luyehla ngesixa esithile, uya kuphulukana nomgama wakho wonke. Indlela yodwa yokuphepha ukucinywa kukongeza imali kwiakhawunti yakho yomda.
Kwimeko yorhwebo oluxhathisayo kwi-5: 1, umda yi-20% (1/5 = 0.2). Nangona kunjalo, njengoko umthamo unyuka, umda uyancipha. Umzekelo, uxinzelelo lwe-20: 1 luya kufuna umda we-5% (1/20 = 0.05). Kananjalo, ukuba urhwebo lwesitokhwe luye ngokuchasene nawe nge-5% okanye nangaphezulu, uya kuphulukana nomda wakho.
Imiyalelo yokuRhweba ngeStock
Ngoku kufuneka sixoxe ngokubaluleka kokubeka iodolo yokuthengisa esitokhwe. Umsebenzi ngamnye owubekayo uya kuhlala ufuna iiodolo ezimbini ezizodwa. Omnye wokuvula urhwebo, kwaye emva koko aluvale.
Ukuba uhamba ixesha elide kwisitokhwe, uvula i-odolo 'yokuthenga' kwaye uvale nge-odolo 'yokuthengisa'
Ukuba ufutshane kwisitokhwe, uvula i-odolo 'yokuthengisa' kwaye uvale nge-oda 'yokuthenga'
Nje ukuba unqume ukuba uyabeka okanye uyayithengisa iodolo, kukho inani lezinye iintlobo zeodolo ocetyiswa ukuba uzibeke.
✔️ Intengiso okanye iMida yokuNciphisa
Nokuba uthengisa ngantoni, uya kuhlala ukhetha phakathi komyalelo 'wentengiso' okanye 'umda' woku-odola.
Ukuba ukhetha iodolo yentengiso, oku kuthetha ukuba uyavuya ukuthatha ixabiso elilandelayo elilandelayo. Abarhwebi abanamava kunqabile ukuba bayenze le nto, njengoko uphulukana nolawulo kwixabiso lakho lokungena.
Umzekelo, ukuba i-Nike stocks ixabisa i-85 yeedola xa ugcwalisa iodolo, unokuba norhwebo lwenziwe nge $ 85.50 Kungenxa yokuba iqonga lokuthengisa ngesitokhwe liya kwenza nje urhwebo kwixabiso elilandelayo lemarike ekhoyo.
Ngenye indlela, unokufuna ukunamathela kumda wokuyalela kwintengiso yakho yesitokhwe. Oku kukuvumela ukuba uchaze elona xabiso kanye ekufuneka urhwebo lwakho lwenziwe kulo. Ewe akunakuze kubekho siqinisekiso sokuba ixabiso lakho liyakuthelekiswa, kodwa ubuncinci likuvumela ukuba ungene kwimarike ngexabiso elisebenzela wena.
Ukuncamathela kumzekelo ofanayo- apho izitokhwe zakwaNike ngoku zithengiswa nge- $ 85. Nangona uziva unomdla, unokufuna ukungena kwimarike xa ixabiso libetha i- $ 83. Oku kukuvumela ukuba uthenge amasheya ngesaphulelo, kwaye ngokuqinisekileyo uphephe okokuqala sasaza.
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-odolo yokuyeka ilahleko iya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni xa uthengisa isitokhwe kwi-Intanethi. Kulabo abangaziyo, oku kukuvumela ukuba uchaze elona xabiso-lexabiso unqwenela ukuvala urhwebo lwakho. Ngokukodwa, ikuvumela ukuba unciphise ilahleko kwimeko apho urhwebo lwesitokhwe luchasene nawe.
Masithi uthengisa isitokhwe se-IBM, kwaye uthatha isigqibo sokungena kwiimarike nge- $ 112 ngomyalelo wokukhawulelwa
Ixabiso lakho lilonke li- $ 500
Ugqiba kwelokuba awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-5% yesibonda sakho, ke useta i-odolo yokulahleka
Ubeka ixabiso lokuyeka ukulahleka kwexabiso kwi-106.40 yeedola- eyi-5% ngaphantsi kwexabiso lakho lokungena le-112
Kwisithuba seveki enye, izitokhwe ze-IBM ngoku zixabisa ama-20% ngaphantsi kwe- $ 89.60
Nangona kunjalo, njengoko ufake i-stop-loss kwi $ 106.40- ulahlekelwe yi-5% yesibonda sakho.
Njengoko ubona koku kungasentla, ilahleko iyonke yehlisiwe yaya kuthi ga kwi-50 yeedola (iipesenti ezi-5 zeedola ezili-1,000 200), ngokuchasene ne-20 lamawaka (iipesenti ezingama-1,000 zeedola ezili-XNUMX XNUMX).
Ngale nto ithethwayo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ii-odolo zokuyeka ilahleko azisoze zaqinisekiswa nge-100%. Ngale nto, sithetha ukuba kwiimeko zentengiso eziguquguqukayo, i-odolo yakho yelahleko yokumisa isenokungalingani.
Kananjalo, kuhlala kufanelekile ukuqwalasela i-odolo yokulahleka 'yokuqinisekisa'. Ngokuhlawula ukusasazeka okuphezulu kancinci, umrhwebi uya kuqinisekisa ukuba ixabiso lokulahleka kwakho liyekisiwe- nokuba uyalingana okanye awulingani.
Thatha i-Order yeNzuzo
Ngokubaluleke ngokulinganayo, i-odolo yenzuzo isebenza ngendlela efanayo ne-stop-loss order, kodwa ngasemva. Ngamanye amagama, ikuvumela ukuba utshixe-ngaphakathi kwiingeniso zakho xa kuthe kwafikelelwa kwinqanaba elithile lamaxabiso.
Umzekelo, masithi uthengisa isitokhwe seCoca Cola ngexabiso lokuthenga le- $ 47. Uzibekele ithagethi yenzuzo ye-10%, ke useta i-odolo yakho yenzuzo kwi- $ 51.70.
Ukuba kwaye nini xa ixabiso leCoca Cola libetha eli xabiso, urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo- kunye nemali eyongezwe kwityala lakho.
Enye yeemetrikhi ezibaluleke kakhulu ekufuneka ujonge kuzo xa ujoyina indawo entsha yokuthengisa istokhwe sisiseko sentlawulo. Oku kunokuza kuluhlu lweemilo kunye nobukhulu, ke kungcono ukuba ubenolwazi olomeleleyo lweentlawulo eziphambili onokuthi uhlangane nazo.
Njengoko igama libonisa, iifizi ezingezizo zokurhweba zinxulumene neerhafu ezingahambelani neenzame zakho zokuthengisa iimpahla. Oku kuqala kwangoko, njengoko abanye abathengisi bezorhwebo babiza umrhumo wedipozithi- esiba yipesenti yesixa osifaka.
Umzekelo, ukuba umrhwebi uhlawulisa i-1.5% kwiidipozithi zeVisa, kwaye ufuna ukongeza i- $ 1,000 kwiakhawunti yakho, uya kuhlawula i- $ 15 kwimirhumo. Oku kuhlala kunjalo kurhoxa, naye-ke qiniseka ukuba ujonga ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Umrhumo ongezelelweyo wokurhweba ekufuneka uwazi kukuba umrhumo wokungasebenzi. Oku kuhlawuliswa ngumrhwebi xa iakhawunti yakho yorhwebo lwesitokhwe ihlala isemnyango iminyaka eliqela. Ukuba iyayenza, umrhwebi uya kunciphisa imali yabo yokungasebenzi kwi-akhawunti yakho eseleyo inyanga nenyanga kude kungabikho nto iseleyo.
Uninzi, kodwa ayingawo onke amaqonga orhwebo esitokhwe aya kuhlawulisa ikhomishini. Kwiimeko ezininzi, oku kuya kuba yipesenti yemali oyithengisayo. Umzekelo, ukuba umrhwebi uhlawulisa ikhomishini ye-0.5%, uthenga izitokhwe zexabiso le-BT ezili-1,000 5, emva koko uya kuhlawula umrhumo we- $ XNUMX.
Qaphela, kuya kufuneka uhlawule ikhomishini kuzo zombini iziphelo zorhwebo. Ke, ukuba uthengisile izitokhwe zakho ze-BT ngexabiso elipheleleyo le- $ 1,200- ikhomishini yakho ye-0.5% iya kuthi ifike kwi- £ 6.
Ngale nto ithethwayo, uninzi lwamaqonga ezorhwebo esithengisa kweli phepha likuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise izabelo zeCFD ngaphandle kokuhlawula naziphi na iikhomishini. Endaweni yoko, kukusasazeka kuphela oya kuthi ujonge.
Abathengisi besitokhwe iNewbie bahlala benza impazamo yokulibala malunga nokusasazeka, njengoko ingeyiyo 'itekhnoloji' umrhumo. Ngale nto, sithetha ukuba ukusasazeka akuthathi nayiphi na imali kwi-akhawunti yakho. Endaweni yokuba ukusasazeka kungumahluko phakathi 'kokuthenga' kunye 'nokuthengisa' ixabiso lesitokhwe.
Ixabiso lokuthengwa kwestokhwe seNike yi- $ 85.00
Ixabiso lokuthengisa ngeempahla zeNike zii- $ 83.30
Umahluko phakathi kwala maxabiso mabini yi-2% Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uzuze ubuncinci i-2% ukuze nje uphule. Umzekelo, masithi ubeke i-oda yokuthenga kwi-Nike kwi-85.00 yeedola- kuphela ukuqonda ukuba wenze impazamo.
Kananjalo, uthatha isigqibo sokuthengisa kwangoko izitokhwe. Nangona kunjalo, endaweni yokuba ukwazi ukuthengisa isitokhwe ngexabiso elifanayo obathengele lona ($ 85), kuya kufuneka wenze njalo kwixabiso lokuthengisa.
Njengoko oku kufikelela kwixabiso elisezantsi le- $ 83.30- uyakwenza ilahleko eyi-2%. Ngobunzima, uyophula kuphela nokuba ixabiso lokuthengisa lenyuke laya kwi- $ 85.
Kungenxa yoko le nto kufuneka ukhethe iqonga lokuthengisa esitokhwe elinikezela ngokusasazeka okuqinileyo. Ngaphandle koko, inzuzo yakho iya kuhlala ityiwa sisikhewu samaxabiso.
Ungathengisa njani ngeZitokhwe ezikwi-Intanethi?
Ungaze uthengise isitokhwe esinye ebomini bakho, kwaye uzibuze ukuba le nkqubo yenzeka njani ngokoqobo iyasebenza? Ukuba kunjalo, uya kufumana isikhokelo esinyathela ngenyathelo ngenyathelo ngezantsi. Ngokulandela izikhokelo, unokuthengisa isitokhwe sakho sokuqala kwimizuzu engaphantsi kwe-10!
Inyathelo 1: Fumana indawo yokuThengisa iStock
Izibuko lakho lokuqala lokufowuna iya kuba kukufumana iqonga lokuthengisa esitokhwe elihlangabezana neemfuno zakho. Umzekelo, ngaba ujonge umrhwebi onikezela ukufikelela kwiimarike zamasheya zamanye amazwe, okanye ngaba yeyona nto iphambili oyifunayo?
Ukukunceda apha endleleni, uya kufumana uninzi lweengcebiso malunga nendlela oyikhethayo indawo yokuthengisa imfuyo ezantsi kweli phepha.
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ngokwakho, singacebisa ukufaneleka kweqonga elidweliswe apha ngezantsi. Ayigcini nje ngokubamba ilayisenisi yolawulo lwenqanaba elinye kunye namakhulu eeasethi ezinokuthengiswa, kodwa unokufaka imali ngokulula ngedebhithi okanye kwikhadi letyala.
Nje ukuba ukhethe indawo efanelekileyo yokuthengisa impahla, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Oku ke umthengisi uyazi ukuba ungubani.
Kananjalo, nikeza oku kulandelayo:
Uyakufuna kwakhona ukuqinisekisa ubungqina bakho. Le yeyona nto ifunekayo kwindawo yokuthengisa kwi-intanethi, njengoko iqinisekisa ukuba amaqonga ahambelana nemithetho echasene nemali. Konke okufuneka ukwenze kukufaka ikopi ecacileyo yesazisi esikhutshwe ngurhulumente, kwaye umrhwebi kufuneka akwazi ukukuqinisekisa kwangoko.
Nje ukuba uqinisekise isazisi sakho, umrhwebi uyakukucela ukuba ufake imali. Ngokweenketho zokuhlawula, oku kuya kwahluka kubarhwebi ukuya kubroker.
Ngale nto ithethwayo, uhlala ukhetha ukhetho lwezezimali kwiakhawunti yakho ngoku kulandelayo:
Ucingo lweBhanki / ukuGqithisela
Inyathelo 4: Fumana ii-Stocks kwi-Trade
Ngoku ukuba ufumene imali kwiakhawunti yakho yomthengisi, ukulungele ukuqala ukuthengisa iimpahla. Ukubhola ibhola, khangela isitokhwe onqwenela ukurhweba. Ukuba awunayo i-equity ethile engqondweni, khangela i-section ye-stock broker.
Inyathelo 5: Beka uMyalelo woRhwebo lweStock
Ukugqiba le nkqubo, ngoku kuya kufuneka ubeke iodolo. Sixoxe nge-ins kunye nokuphuma kwendlela obeka ngayo i-odolo yokuthengisa esitokhwe ngaphambili kwisikhokelo sethu, ngoko ke zive ukhululekile ukuphonononga eli candelo ukuba ufuna ukuvuselela imemori yakho.
Ngaphandle koko, landela la manyathelo akhankanyiweyo ngezantsi ukuze kwenziwe urhwebo lwakho lokuqala lwesitokhwe:
Khetha ukuthenga (ixesha elide) okanye uthengise (mfutshane)
Ngenisa ubungakanani kurhwebo lwakho (kwimali yeakhawunti yakho)
Khetha kwintengiso okanye umda wokuyalela
Cwangcisa i-odolo yokuyeka ilahleko ukunciphisa umngcipheko
Misela i-odolo yenzuzo yokutshixa inzuzo yakho
Nje ukuba uqinisekise iodolo, ukuthenga kwakho kuya kufuneka kwenziwe kwimizuzwana embalwa.
Inyathelo 6: Ukuvala ukurhweba ngeStock
Ukuba ubeke ilahleko yokumisa kunye nokwenza i-odolo yenzuzo, awuzukufuna ukwenza enye into ngokuqhubeka. Kungenxa yokuba inye kuphela kwizinto ezimbini ezinokwenzeka. Nokuba wenza imali xa i-odolo yakho yenzuzo ithathwa, okanye uphulukana nemali xa i-odolo yakho yokuyeka ilahleko ibangelwa.
Ngale nto ithethwayo, ukuba awukhange ufake naziphi na ii-odolo zokuphuma kwintengiso yesitokhwe, kuya kufuneka uyivale ngesandla.
Ukuba ubeke i-oda yokuthenga, faka i-odolo yokuthengisa ukuphuma kurhwebo lwakho
Ukuba ubeke i-odolo yokuthengisa, faka i-oda yokuthenga ukuphuma kurhwebo lwakho
Nje ukuba urhwebo lwakho luvaliwe, ingeniso iyakongezwa kwibhalansi yeakhawunti yakho yorhwebo.
Ungayikhetha njani iQonga lokuRhweba ngeSitokhwe
Ke ngoku ekubeni sichazile ii-ins kunye nokuphuma kwendlela urhwebo lwestokhwe olusebenza ngayo, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ngeqonga onqwenela ukulisebenzisa. Kukho ngokoqobo amakhulu ababoneleli kwimarike, ke ukwazi ukuba ngowuphi umthengisi oza kungena kunye naye kunokuba ngumceli mngeni.
Kananjalo, singacebisa ukuba senze oku kulandelayo ngaphambi kokujoyina indawo entsha yokuthengisa iimpahla.
Ngaphambi kokuba ufike kwiimetriki ezinjengeentlawulo, ukusasazeka kunye neentlawulo-kufuneka uqinisekise ukuba iqonga lakho elikhethiweyo lokuthengisa isitokhwe lilawulwa. Bonke abathengisi abacebisa ukuba babambe iphepha-mvume elinye elinemizimba enje FCA (EUK), ASIC (Ostreliya), okanye iCySEC (iSipro). Ukuba ugqiba ukujoyina umrhwebi ayikho kulawulwa, iimali zakho zisemngciphekweni.
Kuya kufuneka ke uvavanye ukuba zeziphi iindlela zokuhlawula ezinikelwa liqonga lokuthengisa ngestokhwe. Uninzi lwabafundi bethu bakhetha ukufaka imali ngedebhithi okanye kwikhadi letyala, kuba oku kukuvumela ukuba uqale ngokurhweba kwangoko. I-E-wallets lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukuxhamla kwiidiphozithi ezikhawulezileyo.
Ngenye indlela, unokuthatha isigqibo sokufaka imali kwiakhawunti yebhanki. Nangona uhlala unelungelo lokufumana imida ephezulu, idiphozithi ingathatha iintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba ifike kwiakhawunti yakho.
Sikhetha amaqonga orhwebo esitokhwe abonelela ngokudibanisa okugqibeleleyo phakathi kokusasazeka okuqinileyo kunye neekhomishini eziphantsi. Umzekelo, abanye babarhwebi bethu abalahlekileyo banikezela urhwebo lwasimahla, kodwa emva koko unokuba usasazekile ncinane ngaphezulu kwamanye amaqonga. Ngokufanayo, inani elincinci labarhwebi libonelela nge-zero-spreads kwizitokhwe ezinkulu, kodwa iikhomishini zihlala zikwicala eliphezulu.
Ukuba ujonge ukurhweba esitokisini ngesibonelelo, kuyakufuneka uqiniseke ukuba umthengisi okhethiweyo uyakuxhasa oku. Kuxhomekeka kwindawo okuyo, unokuthintelwa kubungakanani bomthengisi onokukunika. Umzekelo, ezo zise-UK kunye ne-European Union zifakwe kwi-5: 1 kwizitokhwe. Ezinye iintlanga azinyanzeli mda kwaphela, ngenxa yoko uhlala ufumana abathengisi abanikezela nge-500: 1, enkulu kakhulu.
Ukuba ujonge ukuthenga nokuthengisa iimpahla ngexesha elifutshane, kubaluleke kakhulu ukuba usebenzise izixhobo zophando. Kwimeko yohlalutyo lobuchwephesha, uya kufuna ukusebenzisa indawo yokuthengisa esitokhwe enika iimfumba zezixhobo eziphambili zokufunda kwitshathi. Izinto ezisisiseko zibalulekile ngokulinganayo kwihlabathi lezitokhwe kunye nezabelo, ke khetha umthengisi onikezela ngeendaba zexesha lokwenyani kwaye iingcebiso zokuthengisa.
Ngaba ukhe wacinga ngeentlobo zestokhwe onqwenela ukuzithengisa? Umzekelo, ngelixa abanye benu bonwabile ngokurhweba ngokulingana kwe-UK ngeLondon Stock Exchange, abanye benu banokufuna ukufikelela kwiimarike zamanye amazwe. Kananjalo, qiniseka ukujonga inani lesitokhwe esibanjwe ngumrhwebi, kwaye ngakumbi, esi sitshintshiselwano esikunika ukufikelela kuso.
Ikhathalelwe ngabarhwebi besitokhwe esitsha, kuya kufuneka ujonge umgaqo-nkqubo wokurhoxa komrhwebi omkhethileyo. Oku kubilisa inani leeyure okanye iintsuku umrhwebi azithathela zona ukwenza inkqubo yokurhoxa. Singacebisa ukubambelela kwiindawo zokuthengisa ezisitokhwe eziqhubekeka ukuphuma kwemali zingadlulanga iiyure ezingama-48 emva kokuba isicelo senziwe.
Kuya kufuneka uphinde uphonononge isebe lenkxaso yabathengi. Sikhetha amaqonga ezorhwebo esitokhwe axhasa okungenani i-24 / 5- emva koko ehambelana naleyo yeemarike zezemali. Siyayithanda ke xa abathengisi bekuvumela ukuba unxibelelane ngencoko ebukhoma, kuba oku kuthintela isidingo sokubiza inombolo engahlawulelwayo.
I-5 yeeNtengiso eziPhambili zoShishino zika-2021-Okhetho lwethu oluphezulu
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda umrhwebi ngokwakho, ngezantsi uyakufumana iingcebiso zethu eziphezulu ezintlanu zesayithi yokurhweba nge-2021.
Zonke iindawo zethu zokuthengisa ezikwizinga eliphezulu zihlangabezana neenqobo zokugweba ezidweliswe ngezantsi:
Imiselwe ngumzimba onelayisensi yomntu omnye
Imirhumo ephantsi, ukusasazeka, kunye neekomishini
Ixhasa iindlela zokuhlawula zemihla ngemihla
Iqela eliphezulu lenkonzo yabathengi
Unike amandla kunye nokuthengisa okufutshane
Ukuba ujonge ukuthatha iinzame zakho zokurhweba ngenqanawa ziye kwinqanaba elilandelayo, sinethemba lokuba isikhokelo sethu esinzulu esisulungekileyo siyisusile inkungu. Ngokusesikweni, sigubungele zonke iimfuno esicinga ukuba kufuneka waziswe ngazo ngaphambi kokubeka urhwebo.
Oku kubandakanya yonke into ukusasazeka, umgaqo, iikhomishini, amandla kunye nemiyalelo. Ngapha koko, sixoxile nangeendawo ezintlanu zeendawo zethu zokurhweba ezisitokhwe eziphezulu ze2021.
Nokuba yeyiphi na iqonga ogqiba ekubeni ubhalise ngalo, qiniseka nje ukuba uyayiqonda imingcipheko yokuthenga nokuthengisa isitokhwe ii-CFDs-ngakumbi ukuba ucwangcisa ukusebenzisa amandla.
Ngaba ndizakufumana izabelo xa ndirhweba ngamasheya kwi-Intanethi?
Ngokuthengisa izitokhwe, ucinga ngekamva lenkampani okwexeshana elifutshane. Njengoko oku kuququzelelwa zii-CFDs, awuyi kuba nelungelo kwizabelo.
Leliphi elona xabiso liphantsi endinokuthi ndilityale kwindawo yokuthengisa isitokhwe
Ubuncinci beediphozithi ziqala ngokujikeleza uphawu lwe- $ 50. Abanye abathengisi bacela ngaphezulu
Kutheni le nto kufuneka ndifake i-ID xa ndirhweba ngesitokhwe kwi-Intanethi?
Iindawo zokuthengisa ezithengiswayo zicela ukuba ulayishe i-ID ukuthobela imithetho echasene nemali.
Yeyiphi imirhumo yedipozithi ekufuneka ndiyibhatalile xa ndirhweba ngesitokhwe?
Imirhumo iza kuluhlu lweemilo kunye nobukhulu. Oku kunokubandakanya iikhomishini zorhwebo, ukusasazeka, iifizi zemali zobusuku, kunye nemirhumo engeyiyo yorhwebo.
Ndingazithengisa njani ngokufutshane izitokhwe?
Ukuba ufuna ukuthelekelela kwixabiso lesitokhwe esiya ezantsi, beka nje iodolo yokuthengisa kumthengisi okhethiweyo. Ukuvala urhwebo lwakho, beka i-oda yokuthenga.
Ngaba ndingathengisa amasheya kunye nomgangatho?
Ewe, zonke iisayithi zokuthengisa iimpahla zeCFD zikuvumela ukuba ufake isicelo. Nangona kunjalo, imida yakho iya kumiselwa yimeko yokurhweba (ukuthengisa okanye ukuthengisa), kunye nendawo okuyo. Umzekelo, e-UK nase-European Union, ukuthengiswa kwestokhwe kufakwa kwi-5: 1 kubarhwebi abathengisayo.
Zeziphi iindlela zokuhlawula endinokuzisebenzisa ukufaka imali kwindawo yentengiso yesitokhwe?
Uhlala ufumana ukhetho lokufaka imali ngedebhithi / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye iakhawunti yebhanki.